OUKITEL dia manolotra ny telefaona vaovao ao amin'ny MWC | Androidsis
OUKITEL dia manolotra ireo findainy vaovao ao amin'ny MWC
OUKITEL dia iray amin'ireo marika marobe hita ao amin'ny MWC 2019. Tamin'ny hetsika tao Barcelona, ​​nanolotra ny sasany amin'ireo finday avo lenta vaovao ity orinasa ity, izay havoaka am-pivarotana amin'ny herinandro ho avy. Anisan'ireo maodely hitanay tamin'ny hetsika ny K9 sy K12, roa amin'ireo modely vaovao amin'ity faritra ity avy amin'ny mpanamboatra sinoa.
Miaraka amin'izy ireo, OUKITEL dia namela antsika niaraka tamin'ny C13 Pro sy C15 Pro ihany koa. Ka tamin'ity andro ity dia naneho endrika vaovao maro izy ireo, izay Nampanantena izy ireo fa hahatratra ny tsena ao anatin'ny fotoana fohy manerana an'izao tontolo izao.
Mahafantatra ny fironana amin'ny tsena ny marika. Afaka jerentsika izany amin'ny maodely vaovao amin'ny laharan'ny OUKITEL K. Tonga ny K9 miaraka amin'ny efijery lehibe, 7,12 santimetatra miaraka amina fefy miendrika rano. Ao anatiny no ahitantsika batterie 6.000 mAh izay tsy isalasalana fa hanome fahaleovan-tena lehibe. Ho fanampin'ny fananana fiampangana haingana. Ity modely ity dia havoaka amin'ny magazay amin'ny volana Mey.
Ny OUKITEL K12 dia misy itovizany amin'ilay maodely hafa. Amin'ny anao, miaraka amin'ny efijery 6,3-inch miaraka amin'ny vahaolana Full HD +. Ny lamosin'ny telefaona dia vita amin'ny hoditra. Ny bateria dia lehibe, manana fahafaha-miaina 10.000 mAh, ankoatry ny fananana fiampangana haingana, araka ny nohamafisin'ny orinasa.
Etsy ankilany avelany miaraka amina faritra vaovao hafa isika, ny OUKITEL C. Ao aminy no ananantsika ny C13 Pro, izay miaraka amin'ny efijery 6,18-inch misy ny lohany. Ao anatinay dia manantena izahay fa hisy mpikirakira MediaTek MT6739, RAM 2 GB ary fitehirizana 16 GB, izay azonay ampitomboina hatramin'ny 64 GB. 3.000 mAh ny bateria ary manana fakan-tsary 5 MP eo aloha izahay. Izy io dia miaraka amin'ny Android Pie zanatany.
Ny maodely hafa ao anatin'io faritra io dia ny OUKITEL C15 Pro. Izy io dia manana haben'ny 6,088 santimetatra, miaraka amin'ny vahaolana 1280 × 600 teboka. Amin'ity tranga ity dia mampiasa processeur MediaTek MT6761 izy, miaraka amin'ny RAM 2 GB sy fitehirizana 16 GB. Ny fakantsary any aoriana dia masolavitra 8 MP roa ary eo anoloana dia misy iray 5 MP. Hanana bateria 3.200 mAh ary Android 9.0 Pie ihany koa izy io.
Tsy ho ela dia hanana data vaovao momba ny fandefasana ireo telefaona ireo isika. Na dia hahalala bebe kokoa aza afaka mitsidika ny tranonkalan'ny orinasa ianao, izay azo atao ny manavao ny vaovao hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OUKITEL dia manolotra ireo findainy vaovao ao amin'ny MWC
Xiaomi Mi MIX 3 5G: telefaona 5G voalohany an'ny Xiaomi dia ofisialy ary notsapainay ho anao izany